Health Health Tips Mental Health
Jun 14, 2022 Hope
စိတ်ညစ်စရာကိစ္စတွေများလာတာနဲ့အမျှ စိတ်သောကတွေရောက်နေရပြီလား? လူတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာ စိတ်ညစ်စရာကိစ္စတွေက အနည်းနဲ့အများ ရှိနေကြပါတယ်… စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ၊ စိတ်သောကတွေဟာ လူငယ်နဲ့ လူလတ်ပိုင်းတွေမှာ အတော်များများ ဖြစ်တတ်ကြပြီး ဒါဟာ အခြေအနေဆိုးလာရင် ကျန်းမာရေးအတွက်
Jun 2, 2022 Hope
ဂရုပြုသင့်တဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေး စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုတာက လူတစ်ဦးရဲ့ကျန်းမာရေးမှာ အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတစ်ဦးရဲ့ကျန်းမာရေးလို့ဆိုလိုက်ရင် ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးတစ်ခုထဲကို ဂရုစိုက်နေရုံနဲ့မရဘဲ ကိုယ်ရောစိတ်ပါကျန်းမာမှ ပြည့်စုံတဲ့ကျန်းမာရေးအစစ်အမှန်ကို ရရှိနိုင်မှာပါ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ စိတ်ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမလဲဆိုတာကို
Health Tips Healthy Lifestyle Mental Health
အားတဲ့ချိန်တိုင်းမှာ ရေခဲတွေစားမိနေလား? ဒီလိုစိတ်ရှိနေတယ်ဆိုရင် စိုးရိမ်ရလား?ဟုတ်ကဲ့, ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ သင့် ရေခဲကို အမြဲတိုင်း ဝါးစားလိုစိတ် ရှိပါက Pagophobia ရှိနေနိုင်ပါတယ်။အာဟာရချို့တဲ့မှုကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရေခဲကို ပုံမှန်ဝါးတာက
မိမိရဲ့စိတ်ခံစားချက် အဆင်ပြေပျှော်ရွှင်အောင် ဒေါက်တာတို့ အခုလို အချက် ၅ ချက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်….__________________________________________________________________ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ မေးခွန်းများမေးမြန်းလိုပါက HOPE မှ ဆရာဝန်တွေကို မနက် ၈ မှ
သင်ဟာ စိတ်ခံစားမှုရှိသူတစ်ယောက်လား? စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုတာဟာ စိတ်ခံစားမှု၊ တွေးခေါ်မှု ဒါမှမဟုတ် အမူအကျင့်များပါ၀င်သော ကျန်းမာရေးအခြေအနေများဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကျန်းမာရေးမှာ လူမှုရေး၊ အလုပ် နဲ့ မိသားစုလှုပ်ရှားမှုများတွင် လုပ်ဆောင်ရတဲ့ ပြဿနာများဖြစ်ပါတယ်….ဒီလို